Joyina uAirbnb ekuncedeni ngeendawo zokuhlala abatshotsha phambili ekulweni iicoronavirus
Iindawo zokuhlala abatshotsha phambili zabasabele kwikhwelo lokulwa iCOVID-19
Ziyintoni iindawo zokuhlala Abatshotsha Phambili?
NgeAirbnb.org, Ababuki Zindwendwe bayakwazi ukunikezela ngendawo yokuhlala kubantu abasabele kwikhwelo lokulwa iCOVID-19 abafuna ukuhlala kufuphi nalapho basebenza khona okanye abafuna ukuba kude neentsapho zabo ukuze zikhuseleke.
Iindawo zokuhlala Abatshotsha Phambili zifumaneka kubantu abasabele kwikhwelo abanento yokwenza nemibutho engenzi ngeniso uAirbnb.org asebenzisana nayo kwaye badinga indawo yokuhlala.
Unomdla wokwamkela abantu abasabele kwikhwelo lokulwa iCOVID-19? Kuza kufuneka ube sele unguMbuki Zindwendwe wakwa-Airbnb okwazi ukunikezela ngendlu yonke.
Fumana okungakumbi ngale nkqubo nangendlela yokwamkela abantu abasabele kwikhwelo lokulwa iCOVID-19.
Yiya kwiziko lethu lolwazi
Iindawo zokuhlala Abatshotsha Phambili neAirbnb.org
Inkqubo yeendawo zokuhlala Abatshotsha Phambili iza kuba yinxalenye yeAirbnb.org, umbutho ongenzi ngeniso oyi-501 (c)(3) ovula amathuba okuhlalisa abantu emakhayeni nawokufumaneka kwezinto eziluncedo ngamaxesha obunzima.